How do I deal with changes in how services work: Ndijongana njani notshintsho lokuba iinkqubo zisebenza njani? – Messages for Mothers
How do I deal with changes in how services work: Ndijongana njani notshintsho lokuba iinkqubo zisebenza njani?
Imeko ye-COVID-19 inzima kakhulu yaye ikhokhelele kutshintsho oluninzi lwendlela iinkqubo ezenzeka ngayo. Ungadibana nobunzima ekliniki, kwisitishi sAamapolisa okanye xa usebenzisa inkonzo yezempilo okanye eyezentlalo. Abaniki-nkonzo nabo bazama ukulawula ngeendlela ezintsha zokwenza izinto yaye abayi kusoloko besazi ukuba yiyiphi imithetho emitsha. Oku kungenza uxinzelelo kakhulu kubo nakuwe. Ukuba uzilungiselela ukulungelana neemeko, kungenza lula ukuba umelane neemeko ngeli xesha. Kunganceda ukucinga ngokuba waphuma njani ebunzimeni kumaxesha adlulileyo.
← How do you know if you’re worrying too much: Wazi njani ukuba uxhalaba kakhulu? → What to do if your child/ren have been in contact with a COVID-positive person: Abantwana abadibene nomntu one- COVID-19